दुई नयाँ सहित आधा दर्जन जीवन बीमा कम्पनीहरुद्वारा लाभांश घोषणा, कुनको बोनस कति ? - Arthatantra.com
दुई नयाँ सहित आधा दर्जन जीवन बीमा कम्पनीहरुद्वारा लाभांश घोषणा, कुनको बोनस कति ?
काठमाडौं । आधा दर्जन जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गरेका छन् । संचालनमा रहेकामध्ये हालसम्म ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् ।
लाभांश प्रस्ताव गर्नेहरुमा सूर्या लाइफ, एशियन लाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायन्स लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् ।
यीमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । सेयरधनीहरुलाई कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि २ प्रीतशत नगद लाभांश दिने भएको हो ।
यस्तै, प्राइम लाइफले अघिल्लो आव २०७६/७७ को लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको हो । उक्त प्रस्तावित लाभांश कम्पनीको मंसिर १९ गते हुने साधारणसभाले पारित गर्दैछ ।
त्यसैगरि रिलायन्स लाइफले आव २०७६/७७ को मुनाफाबाट कर समेत गरि ५.२६ प्रतिशत, ज्योति लाइफले ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद र सूर्या लाइफले १२.७० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.६७ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ ।
जसमध्ये गुराँस लाइफले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले ५.५० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनका लागि ०.२९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । उक्त प्रस्ताव मंसिर १० गते हुने वार्षिा साधारणसभाले पारित गर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ मंसिर ७ मंगलवार १०:४१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे मेगा बैंकको साधारणसभा मंसिर २८ गते: लाभांश पारित गर्दै, बुक क्लोज कहिले ?
पछिल्लाे एकैदिन १६०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?